Dagaal ka dhacay Hiiraan. - Wargeyska Faafiye
Dagaal ka dhacay Hiiraan.
Dagaal gaystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ciidanka dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ku dhexmaray tuulo lagu magacaabo Cabdikariim oo ku taalla galbeedka magalaada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
Kabtan Cabdifitaax Axmed Cismaan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska ee magaalada Beledweyne ayaa Bar-kulan u xaqiijiyay in saddex ka tirsaneyd maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen afar qorina ay ka furteen, ayna la wareegeen gacan-ku-haynta deegaankaas.
Wuxuu sheegay in ay weerar ku qaadeen fariisin ay Al-Shabaab ku lahayd deegaankaas, kaddib markii ay ka warheleen inay dhibaato ku hayso dadka rayidka ah.
Cabdifitaax Axmed Cismaan ayaa caddeeyay in aanu dhankooda wax khasaare ah ka soo gaarin dagaalka, isagoo xusay in ay sii baacsanayaan haraadiga Al-Shabaab.
Dadka deegaanka ayuu ujeediyay inay la shaqeeyaan ciidanka dowladda Soomaaliya si loo sugo amaankooda.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDHAGEEYSO:Iftin Baasto oo Sheegay inuu Wali Joogo Kismaayo .Mali coup leaders defy deadline for quitting powerMadax Weeynaha jabuuti ooka fakaday dil lasoo qaabeeyeyAMISOM oo laga dalbaday Stadium MuqdishoSomaliland targets oil and gas investors